Abuur kaararka ganacsiga asalka ah si fudud adigoo adeegsanaya Kaararka Ganacsiga ee GN | Waxaan ka socdaa mac
Abuur kaararka ganacsiga asalka ah si fudud adigoo adeegsanaya Kaararka Ganacsiga ee GN
Jose Alfocea | | Barnaamijyada Mac
Kaararka ganacsiga waa cunsur aad muhiim ugu ah sawirka shirkadda ama xirfadle. Tilmaam fudud ayaa kuu oggolaanaya inaad ballaariso shabakadda xiriirada, macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha sidaa darteedna, qaabeynta iyo daryeelka la qaadanayo marka la diyaarinayo kaararka ganacsiga waa mid muhiim ah.
"Kaararka Ganacsiga ee GN ee loogu talagalay bogagga" ma aha codsi fudud, laakiin waa soo-ururinno badan oo arrimo ah si gaar ah loogu sameeyay in loogu isticmaalo Bogagga, Tifatiraha Apple Text. Baakadan waxaad ka heli kartaa xirmo ka kooban in kabadan laba boqol oo tusaalooyin asal ah, oo leh naqshado iyo qaabab kaladuwans, kaas oo aad ugu gudbin karto sawir ka fiican shirkaddaada ama ganacsigaaga. Waxaad kala dooran kartaa qaabka kaarka ganacsiga caadiga ah iyo kan xarrago leh, ama waxaad dooran kartaa wax aad u dhiirran, midab leh, hal abuur leh oo casri ah.
Kaararka Ganacsiga ee GN ee loogu talagalay Bogagga
Nooc kasta oo aad u dooratid kaararkaaga ganacsiga, sheybaarada uu Graphic Node ku dhex daray xirmadan ayaa kaa caawin doona inaad u hesho qaabka iyo qaabka ugu habboon shirkaddaada. Intaa waxaa dheer, waa a aad u fududahay in la isticmaalo qalab, sida codsiyada kale ee aan horey kuugu soo bandhignay Waxaan ka socdaa mac.
Dhammaan moodeellada ayaa ah heer sare ah. Dhammaantood waxay leeyihiin walxo kala duwan oo aad adigu u habeyn karto hadba sida aad u kala jeceshahay iyo baahiyahaaga, cabbirkooda cabirkooda, beddelidda midabada, wax ka beddelashada cabbirka iyo farta warqadda, ku daridda ama tirtiridda sanduuqyada qoraalka, adigoo si toos ah ugu qoraya qoraalkaaga (ama ku dhajinaya) magaca ganacsigaaga, faahfaahinta xiriirkaaga ... Fikrad kasta oo aad maskaxda ku hayso, waad ku fulin kartaa si dhakhso leh oo fudud, dhib la'aan.
Intaas waxaa sii dheer, cabbirrada ayaa horeyba loogu habeeyay qaababka caadiga ah sidaa darteed, marka aad dhammaysato nashqadahaaga, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad iyaga daabacdo.
"GN Business Cards for Pages" waxay leedahay qiime joogto ah oo ka badan toban euro, si kastaba ha noqotee hadda waxaad ka faa'iideysan kartaa qiimo dhimis 90% ah oo waxaad ku heli kartaa kaliya 1,09 XNUMX ee Mac App Store. Soo bandhigidani waxay ku mahadsan tahay ololaha "Mac App Store Sales", sidaas darteed waa la sii wadi doonaa ansax ah ilaa berri, jimce saqda dhexe. Ha ilaawin inaad u baahan tahay Bogag aad ku rakibtay Mac-gaaga.Haddiise aakhirka aadan hadalka dhameyn, waxaad codsan kartaa in laguu soo celiyo oo aad soo ceshato lacagtii euro ee aad maalgashatay.
Qaababka Kaararka Ganacsiga ee GN10,99
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Abuur kaararka ganacsiga asalka ah si fudud adigoo adeegsanaya Kaararka Ganacsiga ee GN
Isticmaalayaal badan ayaa soo sheegaya qalad firmware ah markay rakibanayaan macOS High Sierra
6 kordhin kordhin cusub oo ah Sawirada loogu talagalay macOS High Sierra